Kuliphi ixesha kufuneka uqale ukunakekelwa kwesikhumba sokuguga? Yaye uneminyaka engakanani ufanele uqalise ukunakekelwa kwesikhumba? Yintoni ekunyamekeleni kwesikhumba emva kweeminyaka engama-27?
Ngokuqhelekileyo kufuneka uvale: musa ukusebenzisa izimonyo zokunyamekela kude kubekho isikhumba siqhelekile. Kodwa eqinisweni iyafana nebhunga kwisambatho sakusihlwa ukuba ihambe iifatata ukumba, ngelixa litsha. Ukucinga ngale nto, uya kuvuma: ukunakekelwa kwesikhumba ebusweni kufuneka kuqalise ukususela kumncinane, kwaye kungekhona xa iingxaki ziqala.
I-Physiologists ithi umntu ukhula ukufikelela kwiminyaka eyi-20. Emva koko, inkqubo yokuguga iqala. Ukunciphisa ukuhlaziywa kweselluli, imetabolism. Ukuqokelela "iintlekele kunye neempazamo" zemikhwa emibi, ukungondleki kunye nolawulo, ummandla wendalo kunye noxinzelelo. Konke oku kubonakaliswe kwimeko yesikhumba: ityhiyhi yayo iyatshintsha, i-elasticity yalahleka, imibimbi kunye nemibimbi zivela. Kwaye ukuba oko kungenakugujwa, ke ukunyusa imida yokuguga kunokwenzeka ngoncedo lokhathalelo lwesikhumba emva kweminyaka engama-27
Nazi imigaqo embalwa ebalulekileyo yale nkathalo:
Gwema nantoni na ephazamisa isikhumba sakho. Ukungabi nobuthongo, ikhofi eyongezelelweyo kunye neesekese, iicicin kunye notywala. Umoya, iqhwa nelitshisa. Izakhelo ezikhethiweyo ezingenakulungiswa. Yenza ukushiya ngobusuku. Ubuthathaka obuboniswa nguwe ngoku, buya kuthatha ukuphumelela kobudala kwixesha elizayo elizayo.
Jonga ukutya. Ukutya okunokulinganisela kunenzuzo kwimpilo yakho ngokubanzi, kunye nemeko yesikhumba ngokukodwa. Phuza ngamanzi amaninzi (ubuncinane ii-2 ilitha ngosuku). Inani elaneleyo lamavithamini kunye nokunyanzela ngaphakathi ngaphakathi - isibambiso sombala obonakalayo.
Hambisa ngakumbi kwaye ungesabi ukubonisa iimvakalelo, ngakumbi ezilungileyo. Imisipha ejongene nesimo sombuso ayifani nenye kwabanye kwaye iyakwazi ukufumana uqeqesho! Kwaye "ukupompoza" kwabo kunye nokunyuka kwe-elasticity ihlehlisela ukubonakala kwemibimbi.
Sebenzisa izimonyo ezikufaneleyo ngokubudala kunye nohlobo lwesikhumba. Musa ukusebenzisa kakubi iindlela ezinamandla: isikhumba sakho sifanele sisebenze ngokwaso. Ukusetyenziswa okungekho sikweni kwamalungiselelo okonkcenkceshela ngesiphumo esinamandla kubangela umphumo ochaseneyo.
Abancedisayo bezona zononophelo zokulwa nokuguga bangama-antioxidants, amavithamini kunye nezihlunu zelanga. Ezi zixhobo mazibe yinxalenye yezonyango zakho. Ngokufanelekileyo, ziyiziqendu zezicatshulwa zezityalo, kunokuba zilungiswe imichiza.
Khumbulani ukutsalwa. Ukunyamekela okunjalo kufuneka kusetyenziswe amaxesha angama-1-2 ngeveki kubo bonke abasetyhini abadala kuneminyaka engama-25. Ngesikhumba esinamafutha kunye nengxaki - nangaphambili, ngamanye amaxesha ngo-14-15. Ingqangi (ukuhluma) nokuhlambuluka ngokujulile kwesikhumba (udongwe, iziqhamo ze-acid) kunceda ekupheliseni i-cell keratinized layer of cells. Nguye owanika ubuso ubuso obunzima bomhlaba, oqinisa imibimbi aze enze ukukhufumla kwesikhumba nzima. Ukupheliswa kwesi siqhelo kubambelela ngokukhawuleza nangokutsha kwesikhumba.
Qinisekisa ukuba usebenzisa ama-moisturizers afanelekileyo uhlobo lwenu lolusu. Khumbula: ukubonakala kwe-acne kunye nesikhumba esomileyo - iinkqubo ezahlukeneyo. Kwaye nokuba isikhumba sinyama sidinga ukunyanzeleka.
Ulusu lufuna ukucoceka. Iiprometics kunye nezixhobo zokwenza izixhobo ozibasebenzisa zikhuselekileyo ezinokukhusela izifo kunye neebhaktheriya. Jonga usuku lokuphela kwezityalo zakho. Uninzi lwemali lunokusetyenziswa emva kweenyanga ezi-6-12 emva kokuvula iphakheji. Iibhontshi, iiponji, abafaki zicelo kufuneka bahlambuluke rhoqo ngesepha sentsana okanye i-shampoo. Iphakheji efanelekileyo kakhulu yesikram iyahlakazeka, kunye ne-dispenser. Kwaye kwinqanaba eliqhelekileyo i-cream ikhatyathwa ngokuchanekileyo ngentonga ekhethekileyo yokucoca (njengokuba isetyenziselwa i-ice cream ngaphambili).
Iingxaki zesikhumba ezinzulu azizami ukuzisombulula ngokwakho okanye kwiingcebiso zamantombazana. Ikhumba lizwi lomzimba wethu. Izinguqu kwiimeko zakhe zibonisa utshintsho kwiimeko zonke iziko. Ngoko ke, ngokunyuka okomile okanye umthamo we-fat, i-acne eqhubekayo, ukubonakaliswa kwezinto eziqhelekileyo okanye ukubonakala kwe-pigmentation, kufuneka uqhagamshelane neengcali. Into ephazamisayo xa ukhangela kwisibuko ingaba uphawu lweengxaki zempilo ezinzulu.
Ungacingi ukuba ukunakekelwa kwesikhumba esikhulayo kukubandakanya ukusetyenziswa kwezonyango ezibizayo ngokuguga. Naliphi amandla omlingo ukhilimu opapashiweyo awunawo, isenzo saso singenamsebenzi ngaphandle kokugcina yonke imithetho yokunyamekela.
Masks ngobuso nobusi
Kunokuphucula intamo kunye ne-décolleté
Ukuphuculwa kwamapolisa ebusweni
Ukubonakala komfazi emva kokubeleka
I-jelly yekhofi kwi-cocktail-liqueur cocktail
Indlela yokusebenzisa izimonyo ngezoqoqosho
Izithethe zomtshato zamazwe ahlukeneyo kunye nabantu behlabathi
I-anyanisi isobho sokulahleka kwesisindo
Isongo sesibhakabhaka silungile kwaye sibi
Pilaf kwi-Panasonic multivarque
Iiswitshi kunye nenkomo, insimbi yentsimbi kunye namakhowa